Si aad Hal Buug u Akhridid Maalintii… – Cabdicasiis Guudcadde
December 20, 2015 July 26, 2016 Guudcadde
Si aad Hal Buug u Akhridid Maalintii…
Dadka badankiisu waxa uu qiil ka dhigtaa in aanu haysan waqti uu wax ku akhriyo, jirtoo xawaaraha celceliska ah ee akhriska dadku yahay 200eray/daq. (laba boqol oo eray daqiiqaddiiba), lagana yaabo in marka ay hadlayaan ay xawli intaa ka badan ku hadlaan (> 200eray/daq.). Waqti aad u badan ayaana uu ka qaataa akhrinta hal buugi, laga yaabaa toddobaad, laba usbuuc ama xataa bil; bil dhan ayuu la cifanayaa hal buug!
Nasiib wanaag waxa maanta suuragal ah in qofku maalin kasta hal buug uu akhriyo; keliyaata haddii uu kordhiyo dhakhsaha akhriskiisa ilaa shan jeer (x5). Marka sidaasi dhacdo, aragti ahaan, waxa aad akhrin doontaa shan-laabka intii aad akhrin jirtay, taas oo ay ka dhalanayso in aad korodhsan doonto aqoon, dhaqan iyo wacyi intii hore ka badan, wararkana tallaabo-tallaabo aad uga bogan doontid.
Saddex waddo oo aad mari kartid, anna aan tijaabiyay, ayaa aan idinla wadaagayaa, si aad hal buug u akhridid maalintii…
Tallaabada Koowaad: Isbar Akhriska Dheeraynta ah!
Ugu horrayntaba waxa ku saaran in aad badisid xaddiga kelmadood ee aad akhridid minitkiiba. Habka u fudud ee aad sidaa u samayn kartaana waa adiga oo adeegsada degelka caanka ah ee Speeder.
Muuqaalka guud ee degelka Speeder
Waxa aad ka helaysaa degelkan maqaallo dhawr ah oo kaa caawin kara in aad akhridid, adiga oo isu qabanaya waqti go’an, hubinayana xawaarahaaga, balse waa in aad saddexdan qodob u fiiro lahaataa:
Waa in aanad sheekayn, ama hadlin, xilliga aad wax akhriyaysid; sheekaynta ayaa ka dheeraysa akhriska, markaa waxa hoos-u-dhac ku imanaya xawligaagii akhriska.
Hoos ha u sii dhex xulin ee fahanka guud ka qaado; garaadkaagu waxa uu leeyahay awood dhakhso badan oo uu ku sawiran karo, ku kala saari karana, erayada loo yeedhiyo, qaab gudeed ah, markaa adigu waxba ha isku taxallujin in aad ilaa daaradda socotid.
Isku day in aad diiradda saartid badhtanka bogga, araggaaga baalahana aad hareeraha u kala dirtid; shaashadda aad isticmaalaysid marka aad tabobbarkan iska qaadaysid ka yara fogoow, xagal habboonna ka istaag.
Marka aad adeegsanaysid Speeder waxa aad ku bilawdaa xawaare ah 250eray/daq. taas oo in yar ka badan xawligii caadiga ahaa ee dadku ka sinnaayeen. Si aad u horumarisid guulaysiga xeeladdan iyo la-qabsigaagaba waxa aad marba ku biirisaa xawaarahaaga 50-100eray/daq. jeerood ka gaadhid heer ay kuguba adkaato in aad xawligaa buuxiso. Waxa la arkaa in aad aakhirka is-arki doontid adiga oo daqiqaddiiba akhrinaya 1000 (kun) eray!
Waxa muhiimka ah marka halkan la joogaayi ma aha in dhakhsaha la kordhiyo oo KELI ah, balse sidoo kale xaddiga kelmadood ee aad akhrinaysid waa in aad badisaa; in aad 2, 3 ama 4 eray aad akhridid markiiba halkii aad ka akhriyi lahayd halka eray ee qudha. Waxa laga yaabaa in ay adag tahay in ay kaa daadegto kun eray ayaa minitkii laga tuurayaa, balse waxa ay adkaantaasi ku kooban tahay marka aad halkii marba eray keliya akhridid, laakiin haddii aad saddex, ama afar, eray akhridid markiiba, tabtani suuragal ayay u eekaanaysaa! Aluutimada waxa aad gaadhi doontaa heer aad bogagga buuggaba xawaare ku dhaaftid, adiga oo laba isku darsaday; dheerayn xagga fara-badnida erayada aad akhriyaysid ah iyo dheerayn xagga fahanka guud ah!
Tallaabada Labaad: Xulo maqaallada iyo buugta aad rabtid
Marka aad ku gudo-jirtid jirrabka Speeder waxa aad xulataa oo aad markaaga horaba naqaysataa nooca maqaallo iyo buugaag ee aad rabtid in aad tijaabada ku martid, ama aad akhridid sidaada bannaanba; kuwaas oo noqon kara aagag aad isku wacan tihiin oo erayada ku jiraa agtaada aanay marti ku ahayn, mawduuca ay ka hadlayaana wax kaaga bilaaban yihiin.
Tallaabada Saddexaad: Diyaarso deegaan wax-akhris
Marba haddii aad soo baratay akhrinta xawliga ah, oo aad hore ka soo qaadatay buugtii iyo agabtii akhris ee aad doonaysay, waxa keli ah ee kaa dhimani waa in aad dooratid, diyaarsatidna, deegaan ku habboon wax-akhriska. Degelkii Speeder-na iska fasax hadda. Sida dhacda marar badan ayaa aad daal-maskaxeed iyo caajisnimo ka dareemi doontaa akhriskii, adiga oo ka caga-jiidaya ayaanad is-arki doontaa, balse ha shiddaysan, waxa aad kaga bixi kartaa adiga oo go’aan qaata, iskuna taxalujiya sidii aad diiradda u saari lahayd akhriskaaga. Codadka muusigga, buuqa iyo wax kasta oo kansho/fursad siinaya in qulub soo kala dhex galo adiga iyo buuggaaga aad akhriyayso waa in aad meesha ka saartaa.
Deegaan bilaa sanqadh ah doono
Qaababka aad deegaan akhriska ku wanaagsan u abuuran lahayd waxa ka mid ah:
Ammin go’an u calaamadi wax-akhris keli ah, waa waax waqtigaaga ka mid ah oo akhrin mooyee wax kale aanad qabanayn, wax kasta oo khalkhal kugu keenaya iska fogee.
Agabyada uu telefankaagu ka mid yahay ee mashquulka kugu keenaya, muusigga iyo wixii cod aan loo baahnayn leh, iyo wax kasta oo iftiin xumadu ka mid tahay ka takhallus. Adiga, buugga iyo bii’adaasi isku keliyooba.
Marka aad wax akhriyaysid qalinka iyo xaashidu yaanay kaa ag-fogaan, markii loo baahdana qoro qormo-qabyeedka (notes) daruuriga kuula muuqda. Tani waxa ay kaa kaalmayn doontaa in aad yaraysid fakaagga/fursadda aad wax ku ilaawi kartid.
Haddii aad arrinta si run-run ah u geshid, oo ay kaa go’an tahay in aad kor u qaaddid heerkaaga wax-akhris, oo aad qaadatid tabobbar kugu filan, waxa aad is-arki doontaa adiga oo si dheerayn ah wax u akhriyaya, maqaallada, diiwaannada iyo buugta marka aad wehel u noqotidna waxa aad soo baxaysaa qalab wax-akhris! Waxa aanad farxad ku dareemi doontaa in aad qoraallada aqoonta kuu kordhinayau akhrido in ka siyaadsan sidii hore ee maalmaha ama xataa toddobaaddada qaadan jirtay!
Xilli-xilli naso, oo nafta ha daalin, siiba maskaxda ha ka oggolaan in ay tabcaannimo dareento, muhiimaddu waxa weeye in aad akhriska isbarataan, akhri, akhri, akhri, akhri…
Qoraalka la haltebiyay: [٣ خطوات تُمكّنـك من قراءة كتاب كامل يومياً] “Saddex Tallaabo oo ku Geyaysiin Doona Akhrinta Hal Buug Maalintii”. Maxamed Ibraahiim.
Previous Hadimadii Turqayaasha?!
Next Si aad Buugaag Badan u Akhridid 2016-ka…
Ismaaciil Axmed muuse says:
Aad baan ugu helay wax aqriskana aad baan uxiiseeyaa
Soo dhawoow walaal. Mar kasta degelkani idinka ayaa uu iidin furan yahay.
Waa astaan wanaagsan oo aad leedahay haddii aad dhaqankaa akhriska xiisaysid. Eebbe ha ku sharfo. Soo dhawoow mar kasta.
mohamoud Abyan says:
aad bana uga riyaaqay run haan tii sxb qormadan
Soo dhawoow. Mahadsanid in badan.
abdirahman muxyadiin daahir says:
OK masha alaaah iwill read every lesson